Sep 09, 2020 Zimbabwe group tries to stop Chinese coal mine in game park An environmental group in Zimbabwe has applied to the country’s High Court to stop a Chinese firm from mining
Zimbabwe Mine Action Review
Zimbabwe should elaborate a gender and diversity policy and implementation plan for mine action. Zimbabwe should review “missed mine drills” (MMDs) to establish a more effcient method of clearance and decrease the time spent on MMDs.
The Ran mine tragedy follows a string of collapses of abandoned mines around the country, and comes only days after 10 informal miners were buried alive in the Premier Estates mine in eastern Zimbabwe, and early November’s Matshetshe mine collapse in Esigodini, a town in southern Zimbabwe, which buried six miners.
Zimbabwe mine collapse: What we know. Wellington Takavarasha, head of the Zimbabwe Miners Federation, told the press that six miners have since been pulled from the rubble; two of the miners are ...
Dec 02, 2020 The Ran mine tragedy follows a string of collapses of abandoned mines around the country, and comes only days after 10 informal miners were buried alive in the Premier Estates mine in eastern Zimbabwe, and early November’s Matshetshe mine collapse in Esigodini, a town in southern Zimbabwe, which buried six miners.
Dec 06, 2020 Illegal mining of gold, which poses serious safety risks, is rampant in Zimbabwe and results in deaths of several people every year. In September this year, five artisanal miners were trapped underground when a shaft collapsed at Task Gold Mine in Chegutu, Mashonaland West Province.
Jun 27, 2020 In a court affidavit, police said Zhang Xuen shot an employee five times and wounded another at the mine he runs in Gweru province, in central Zimbabwe, during a
Nov 12, 2020 BRAVURA Holdings, a company owned by Nigerian billionaire, Benedict Peters, said it planned to build a new platinum group metals (PGMs) mine in Zimbabwe, starting in about 18 months. “From where we are now, we will go to resource definition, after that we will go to resource modelling, after mine development and then mine construction,” Lionel Mhlanga, Bravura’s manager in the
Dec 02, 2020 Last Updated: 2nd December, 2020 08:31 IST Rescue Slows A Week After Zimbabwe Mine Collapse Rain and flooding have slowed down rescue efforts at a Zimbabwean mine where a shaft collapsed last week, trapping at least 10 artisanal miners.
<< Previous:Quarry Mineral Processing Plant Design Coal